Emmanuel Macron oo qarka u saaran inuu lumiyo aqlabiyadda Baarlamaanka | Entertainment and News Site
Home » English News » News » Emmanuel Macron oo qarka u saaran inuu lumiyo aqlabiyadda Baarlamaanka
Emmanuel Macron oo qarka u saaran inuu lumiyo aqlabiyadda Baarlamaanka
daajis.com:- Isbaheysiga dhexe ee madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa la saadaalinayaa inuu ku guuleysto inta u dhexeysa 200 iyo 250 kursi, oo ah tiro ka yar 289ka kursi ee looga baahan yahay inay si toos ah u helaan aqlabiyadda baarlamaanka Qaranka.
Wax ka yar laba bilood ka dib markii dib loo doortay madaxweyne, Emmanuel Macron waxa uu u socdaa in uu lumiyo awoodda baarlamaanka qaranka Faransiiska ka dib dadaal xooggan oo ay sameeyeen xisbiyada iska soo horjeeda.
Isbaheysiga bidix ee cagaarka ah ayaa la saadaalinayaa inuu ku soo bixi doono kaalinta labaad, iyadoo xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen uu galay kaalinta saddexaad.
Madaxweyne Macron ayaa hadda wajahaya rajada ah in uu lumiyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada.
Ra’iisal wasaaraha France Elisabeth Borne ayaa khudbad jeedisay kadib natiijadii ugu horaysay ee Axadii ayaa waxa ay sheegtay dalkeeda uu galayo khatar.
“Xaaladdani waxay u taagan tahay khatar dalkeenna, marka la eego khataraha aan wajaheyno heer qaran iyo mid caalami ah,” ayay tiri.
Hoggaamiyaha bidix-fog Jean-Luc Mélenchon ayaa ku raaxaysanayay guushiisa uu ku keenay xisbiyada caadiga ah isbahaysigiisa sal-ballaaran. Waxa uu taageerayaashiisa u sheegay in xisbiga madaxtooyadu uu soo gaaray jab weyn, wax kastana ay hadda gacantooda ku jiraan.
Ms Le Pen ayaa iyadoo faraxsan sheegtay in Emmanuel Macron loo dhiibay dawlad laga tiro badan yahay.
Jamhuuriga garabka midig ayaa sidoo kale ku farxay, sababtoo ah tiradooda dib ugama dhicin.
Emmanuel Macron ayaa in ka badan 300 oo kuraas ku lahaa baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday.
Si uu u sii wado aqlabiyadiisa saxda ah waxa uu u baahday 289 kursi, laakiin saadaasha Axada ee ku dhawaad ​​210 ilaa 250 kursi ayaa ka xun sidii la filayay.
Isbahaysiga Nupes ee Mr Mélenchon ayaa lagu wadaa inuu ku guuleysto 150 ilaa 180 kursi, halka xisbiga midigta fog ee Rally National Rally uu wado inuu ka kaco 8 kursi oo uu ka dhigo inta u dhaxaysa 80 iyo 100.
Posted by Bulsha Arrimaha Bulshada, Published at 19:53 and have